Owayegijima kuMaZulu uthokozela ukucula umaskandi | News24
Johannesburg – Uthi uyakuthokozela ukuba ngumculi kaMaskandi owazakhela udumo ebholeni likanobhutshuzwayo uuMlethwa uMajola.
Ngokubika kweDaily Sun uMajola owayegijima kuMaZulu FC wabeka amakhokho ethala ngo-1992 wabe esengena emculweni.
Nakuba ehlale isikhathi eside esemculweni uMlethwa kodwa uze wakhi[ha i-albhamu yakhe yokuqala ngo-2010.
“Ngiyakuthokozela ukuba wumculi njengoba kwaba yiphupho lami kusukela ngikhula.
OLUNYE UDABA: USgwebo uzowubeka kwelinye izinga umaskandi
Kulezi zinsuku angikwazi ukuhamba ezitaladini ngingamiswa ngabalandeli bomculo wami,” kusho uMlethwa enanela ngokuthi nabanye abaculi kulo mkhakha sebeyamhlonipha manje.
Kusukela eqale ukukhipha ama-albhamu ngo-2010 useke wahlabana nezindondo ezimbili zamaSouth African Traditional Music Achievemnt Awards.
UMlethwa uthe uyakuthokozela ukucula nabaculi abahlonishwayo emkhakheni kaMaskandi okubalwa kubo uThokozani Langa, Mtshengise Gcwensa neziNgane Zoma nabanye.